Dood cilmiyeed looga hadlayay sida lagu xoojin karo nabada iyo ammaanka oo lagu qabtay degmada Afgooye
Updated About:316 days ago 0
Dood cilmiyeed halku dhigiisu ahaa “Sidee u xoojin karnaa nabadda iyo ammaanka ka dhalatay Degmada Afgooye” ayaa maanta ka dhacay degmada Afgooye gaar ahaan xarunta beerta Sheekh Zayed, kaasoo ay ka qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada, sida Odayaasha dhaqanka, Culumaa’udiinka, Dhalinyarada, Haweenka iyo Ciidamada ammaanka degmada.
Hey’adda Wada hadalka bulshada oo soo qaban qaabisay Dood cilmiyeedkan oo ah kii u horeeyay noociisa ayaa waxaa furitaanka munaasabada dood cilmiyeedka ka qeyb galay Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, Maamulka Gobolka Banaadir, maamulka Gobolka Shabellaha Hoose iyo kan degmada, iyo Saraakiisha ciidamada dowladda.
Guddoomiyaha Degmada Afgooye C/llaahi Axmed Iidey oo halkaasi ka jeediyay khudbadda furitaanka ayaa ugu horeyntii uga mahad celiyay Hey’adda CCD ee suura gelisay kulanka bulshada degmada, isagoo ballan qaaday inay ciidamada amniga iyo qeybaha bulshada ay iskaashadaan sidii loo xoojin lahaa nabadda ka dhalatay degmada Afgooye.
Waxaa uu Guddoomiyaha degmada Afgooye ka codsaday maamulka Hey’adda CCD inay kordhiyaan Siminaarada noocaan oo kale ah oo bulshada degmada lagu baraarujinayo sidii ay uga midoobi lahaayeen wax kasta oo danahooda ka hor imaanaya.
Guddoomiye K/xigeenka gobolka Sh/hoose ee dhinaca arrimaha bulshada gobolka Cumar Maxamuud Cilmi ayaa sheegay in bulshada gobolka degan ay ballan qaadayaan inay si wadajir ah isaga kaashanayaan adkeynta nabadgelyada ka jirta gobolka.
“Far kaligeed fool ma dhaqdo, bulshada gobolka Sh/hoose waa inay si wadajir ah isaga kaashadaan nabadda iyo inay mar kale dib ugu soo noqon” ayuu yiri Cumar Maxamuud Cilmi oo uga mahad celiyay in markii ugu horeysay Hey’adda CCD degmada Afgooye u qabato dood cilmiyeed dhex maraya bulshada ku dhaqan degmada Afgooye.
Guddoomiyaha Hey’adda CCD Ciise Axmed Cumar oo halkaasi ka jeediyay khudbad ku socota dadka reer Afgooye ayaa ku booriyay bulshada degmada inay ka faa’iideystaan nabadda ka curatay degmadooda, isagoona tilmaamay in bulshada degmada Afgooye iyagoo ku cibro qaadanaya dhibaatadii ay ku hayeen Al-Shabaab ay marka hore xoojistaan nabadooda, isla markaana iska kaashadaan sidii ammaankooda ay u xajisan lahaayeen.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay abaabulka iyo farxadda idinka muuqata, waxaana ballan qaadayaa in hay’adda CCD ay kordhineyso siminaarada iyo wacyi gelinta ay bulshada degmada uga wada hadlayaan nabadda iyo horumarka degmada” ayuu yiri Guddoomiyaha CCD oo intaa ku daray in Hey’addiisa ay garab taagan tahay bulshada degmada Afgooye, sidii danahooda uga wadahadli lahaayeen.
Sidoo kale waxaa ka hadashay dood cilmiyeedka Jawaahir Baarqab oo ah Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadur ayaa sheegay in Gobolada Banaadir iyo Sh/Hoose ay yihiin labo gobol deris ah, shacabkooda walaalo yihiin, sidaasi daraadeedna waxay tilmaantay in bulshada labada gobol ay ka dhaxeeyaan dano fara badan oo ay ugu horeyso sidii ay isaga kaashan lahaayeen nabadgelyada labada gobol.
“Bulshada degmada Afgooye oo runtii ah bulsho fac weyn, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay heybadda ka muuqata ka qeyb galayaasha dood cilmiyeedka” ayay tiri Jawaahir Baarqab oo dhinaca kale ku boorisay shacabka degmada inay la shaqeeyaan ciidamada, isla markaana ay soo sheegaan kuwa fidno wadayaasha ah ee la doonaya nabadgelyo xumida.
Nabadoon Sayid Cali Muuse oo ka mid ah waxgaradka degmada Afgooye ayaa sheegay in bulshada degmada ay kordhinayaan kulamada noocaan oo kale ah taasi oo ujeedadeedu tahay sida bulshada degmada ay ku xoojinayaan ammaanka iyo xasiloonida.
Jen. Ibraahim Yarow oo ah Taliyaha Guutada lixaad ayaa sheegay in nabadda ka dhalatay degmada Afgooye loo huray dhiig dhaqaale, sidaa daraadeedna loo baahan yahay in bulshada degmada iyo ciidamada dowladda si wadajir ah isaga kaashadaan in kooxaha fara ku tiriska ah ee ku dhuumaaleysanaya degmada loo soo qabto isla markaana gacanta ciidamada loo soo geliyo.
“Waxaan balan qaadeynaa in adkeynta nabadgelyada aan u hurno dhiig, aniga ayaana kow ka ah oo nafteyda u huraya adkeynta nabadgelyada degmada Afgooye” ayuu yiri Jen. Ibraahim Aadan Yarow oo sheegay in degmada Afgooye ay tahay goobaha ugu nabadgelyada wanaagsan marka loo eego goblada kale ee dalka.
Ugu dambeyntii Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Deeqo C/qaadir Axmed ayaa halkaasi ka jeedisay khudbadda xiritaanka dood cilmiyeedka, waxayna ku boorisay ka qeyb galayaasha dood cilmiyeedka inay ka faa’iideystaan casharada ay halkaasi ku barteen, iyadoona ku ammaantay dadka degmada Afgooye inay yihiin dad nabadeed, waxayna u mahad celisay hay’adda CCD oo markii ugu horeysay degmada Afgooye dood cilmiyeed u qabto bulshada ku dhaqan degmadaasi.